Impilo-Ntle | Eyenkanga 2021
Inkampani, Imfundo Yezempilo Impilo Inkampani, Ukuphuma Iindaba Ukuphuma Imfundo Yezempilo Inkampani Ekuhlaleni Iindaba, Impilo Cinezela Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Impilo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Izilwanyana Zasekhaya Inkampani, Iindaba
Izizathu ezili-10 zokuba kutheni izigulana zingalandeli imiyalelo yoogqirha
Ukubambelela kunyango kubalulekile kwaye kubaluleke kakhulu ukuba ukwimithi yokonga ubomi. Kodwa abanye abaguli abasathathi amayeza abo. Nazi izizathu ezili-10 zokuba kutheni.
Imibuzo emi-5 ekufuneka usoloko uyibuza ikhemesti yakho
Nokuba unayo okanye awunayo inkxalabo, kuya kufuneka usoloko ubuza usokhemesti le mibuzo ilula xa uqala amayeza amatsha.
Iingcebiso ezi-5 zokuhamba namayeza amiselweyo
Uthini umgaqo-nkqubo wamayeza we-TSA? Ngaba ndiyakwazi ukupakisha iimedali kuqhubekeka? Iingcebiso zethu zokubhabha kunye namayeza amiselweyo ziya kulungiselela iholide eyonwabileyo, esempilweni.
Izibonelelo zamalahle asebenzayo kunye nendlela yokuyisebenzisa ngokukhuselekileyo
Ngaba amalahle akulungele? Ngaba ikhuselekile? Funda ngendlela yokusebenzisa amalahle asebenzayo ekucoleni ukutya nasekudleni, kwaye ubone ukuba zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga ekufuneka uzazi.
Indlela yokunciphisa kwi-'Quanan-tinis '
Emva konyaka we-COVID-19, i-coronavirus kunye notywala zibonakala zihamba-ngesandla. Ukuba ukusela kwakho kuyingxaki, nantsi indlela yokunciphisa.
Ngaba iapile cider viniga inezibonelelo zempilo?
Sihlolisise izifundo saza sabonisana noogqirha malunga neenzuzo zokwenyani ze-apile cider viniga, saza sazilinganisa nezo ziziphumo ebezingalindelekanga — nantsi into esiyifumeneyo.
Ngaba iapile cider iviniga inganceda ukunciphisa umzimba?
Ngaba ukusela iviniga yeapile cider ukunciphisa umzimba kuyasebenza? Funda ngento eyenziwa yi-ACV emzimbeni wakho kunye nokuba amanye amachiza okuphulukana nobunzima angaluncedo njani.
Izizathu ezi-7 zokuba ufumane umzimba wonyaka
Ngaba awuqinisekanga nokuba umzimba wonyaka uyimfuneko? Funda okubandakanyiweyo kuvavanyo lomzimba lonyaka, ngubani omele ayifumane, kunye nendlela yokonga imali kukhathalelo lwempilo.
Ukutya okufanelekileyo kweemeko ezili-15 eziqhelekileyo zempilo
Funda malunga notshintsho kwindlela yokutya onokuyenza ukulawula iimpawu zakho zeemeko zempilo ezinje ngeswekile, uxinzelelo lwegazi kunye ne-IBS.
14 unyango lwe-hangover olusebenzayo
Akukho mntu ufuna ukuchitha iintsuku zakhe egula ebhedini (ezisola ngokukhetha izolo ebusuku). Ukuba u-imbibe, unokufuna oku kunyango lwe-hangover olusebenzayo.
Ezona zi-7 zilungileyo zokukhumbuza usetyenziso kunye nezixhobo
Ngaba uyalibala ukuthatha amayeza amiselweyo? Eziapps zokukhumbuza amayeza ziluncedo ziya kukuthumela izilumkiso zesiko nge-meds, refills, kunye nokunye.
Ezonaapps zilungileyo zokunceda kulawulo lwempilo yengqondo
Unyango zokusebenza akufuneki zithathe indawo yotyelelo logqirha, kodwa eziapps zikumgangatho ophezulu zempilo yengqondo zinokubonelela ngenkxaso kubasebenzisi abanoxinzelelo okanye uxinzelelo.
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabantu abadala malunga neevithamini
Izidingo zesondlo zitshintsha njengoko uneminyaka yobudala. Ezi ngcebiso kwiivithamini kubantu abadala zinokukunceda uqiniseke ukuba ufumana ngokwaneleyo oko kucetyiswa iminyaka engama-50, 60, nama-70.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nomnikelo wegazi
Umntu othile eMelika ufuna igazi rhoqo kwimizuzwana emibini. Ekuphela kwendlela yokubonelela ngalo ngumnikelo wegazi. Nantsi indlela esebenza ngayo, kwaye inceda bani.
Ngubani onokunikela ngegazi-kwaye ngubani ongakwaziyo
Iimfuno zokunikela ngegazi zikhusela abanikeli kunye nabamkeli. Ezinye iimeds kunye neemeko zempilo zinokuthintela ekubeni unike igazi. Fumanisa ukuba ngubani onokunikela ngegazi.
Ungakuphepha njani ukukhathala ngumongi
Kunokuba luncedo ukunceda umntu omthandayo, kodwa kunokuba nzima. Ngaphambi kokuba utshise umntu okhathalelayo, zama ezi ngcebiso.
Isikhokelo somkhathaleli ekuzikhathaleleni nasekuthinteleni ukudinwa ngumkhathaleli
Abanonopheli basemngciphekweni wokudinwa ngokweemvakalelo nangokomzimba. Funda izinto ezinobungozi, iimpawu zokudinwa, kunye neengcamango ezithile zokunciphisa ingozi yokudinwa.
Uvavanyo lwe-2020 CBD
Uvavanyo lwethu lwe-CBD lufumanise ukuba isinye kwisithathu sabantu baseMelika bazamile i-CBD, kwaye i-45% yabasebenzisi be-CBD bandise ukusetyenziswa kwabo ngenxa ye-coronavirus. Funda malunga nokusetyenziswa kwe-CBD eMelika.
9 ukusilela okuqhelekileyo kwezondlo eMelika
Phantse iipesenti ezili-10 zabantu base-US banesiphene sezondlo. Inokubangela iingxaki zempilo yokwenyani, xa inganyangwa, kodwa iyalungiswa ngezi ndlela.
Ngaba uyafuna iyeza lepseudoephedrine
ungawathatha amayeza e-aleji ngelixa ukhulelwe
ndingayinika ntoni iminyaka yam emi-2 yokugula komzimba
ungasika i-wellbutrin sr kwisiqingatha
Yintoni intengo ye-cialis 20mg